Mogdishu- Abwaan Cabdikariin Faarax Qaareey - The Latest News - Locally and Around the World
Mogdishu,2022- (AUN) Waxaa magaalada Mogdishu ku geeriyooday Cabdikariin Faarax Qaarey oo ku magacdheeraa amaba ay Soomaalidu u taqiinay Cabdikariin Jiir.Waxaa uu ahaa mid ka mid ah Laxamiistayaasha amaba hal abuurka Somaalida kuwooda ugui caansanaa.
Taariikhdiisa oo kooban- MArxuumku waxaa uu ku dhashay magaalo xeebeedka Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1943dii. Waxuuna ku soo barbaaray yaraantiisii isla magaalada Hobyo , halkaasi oo uu ku soo qaatay dugsiga hoose iyo dhexeba.
Waxii ka danbeeyey markii ay Soomaalidu qaatatay gobanimada 1960kii oo ayuu uu soo wareegay dhankaan iyo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho .Sedax sano kedib Sedax sano kedib markii uu dalku qatay xornimada 1963dii ayuu ka qeybgalay tartan faneed la qabtay.
Taariikhda Marxuumka oo aan halkaan lagu soo koobi karin awadeed ugu danbeyn Marxuumku waxuu ku geeriyooday magaalada Mogdishu.
Hiranstate Admin at 2:28 PM